Guddoomiye Shuute oo digniin u diray Ciidamda Galmudug | KEYDMEDIA ONLINE
Guddoomiye Shuute oo digniin u diray Ciidamda Galmudug
Isagoo la hadlayay ciidamada dowlad goboleedka Galmudug ayuu digniin culus u jeediyay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Shuuto.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute oo ku sugnaa labadii maalin ee u dambeysay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ayaa farriin udiray Ciidamada Galmudug.
Guddoomiye Shuute ayaa isagoo la hadlayay Ciidamda u sheegay in askarigii lasoo sheego isagoo qeyb ka qaadanaya dagaal beeleed yada ka dhaca deegaanada hoos yimaada Galmudug la marin doono sharciga.
Wuxuu sheegay in lala xisaabtami doono cid walba oo lasoo helo iyadoo ku lug leh fal ka baxsan waxa uu sharcigu u ogol yahay, isagoo ula jeeda qofkii dagaal beeleed ka qeyb qaata ee caddeymihiisa lasoo helo.
Toddobaadyadii u dambeeyay deegaano hoos yimaada degmada Dhuusamareeb waxaa ka socday dagaal beeleed la sheegay in ay qeyb ka qaateen Ciidaada Darawiishta Galmudug, waxaana guddoomiye Shuute soo gaartay warbixin muujinaysa in Ciidamda qalabka sida ay qeyb ku lahaayeen dagaal beeleedka.